Vaovao - Inona no maha samy hafa ny UPC sy ny APC Connector?
Inona no maha samy hafa ny UPC sy ny APC Connector?
Matetika isika no mandre momba ny famaritana toy ny "LC / UPC multimode duplex fibre optic patch tariby", na "ST / APC single-mode simplex fibre optic jumper". Inona no dikan'ireo teny UPC sy APC connector ireo? Inona no maha samy hafa azy ireo? Ity lahatsoratra ity dia mety hanome fanazavana ho anao.
Inona no dikan'ny UPC sy APC?
Araka ny fantatsika, fibre optic tariby fivoriambe dia indrindra amin'ny connectors sy ny telegrama, ka ny fibre tariby fiangonana anarana mifandray amin'ny connector anarana. Antsoinay tariby LC fibre patch tariby, satria io tariby io dia miaraka amin'ny LC fibre optic connector. Eto ny teny hoe UPC sy APC dia tsy misy ifandraisany afa-tsy amin'ny connecteur fibre optic ary tsy misy ifandraisany amin'ny tariby fibre optic.
Isaky ny misy connecteur apetraka eo amin'ny faran'ny fibre dia misy ny fahaverezana. Ny sasany amin'io fahaverezan-jiro io dia hita taratra mivantana midina avy any amin'ny fibre mankany amin'ny loharanon-jiro niteraka azy. Ireo taratra lamosina ireo dia hanimba ny loharanon-jiro tamin'ny laser ary hanakorontana ihany koa ny famantarana alefa. Mba hampihenana ny fisaintsainana miverina, dia azo atao ny manaloka ny ferrules connector amin'ny endriny samihafa. Misy karazany efatra ny connector ferrule polishing style amin'ny rehetra. UPC sy APC dia karazany roa amin'izy ireo. Anisan'ny UPC dia mijoro ho Ultra Physical Contact ary APC dia fohy ho an'ny Angled Physical Contact.
Ny fahasamihafana eo amin'ny UPC sy ny APC Connector
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny connector UPC sy APC dia ny endriky ny fibre. Ny connecteurs UPC dia voaporitra tsy misy zoro, fa ny connecteur APC dia manana endrika fibre vita amin'ny fibre izay voaporitra amin'ny zoro 8 degre. Miaraka amin'ny mpampitohy UPC, izay hazavana hita taratra dia taratra mivantana mankany amin'ny loharanon-jiro. Na izany aza, ny tarehin'ny faran'ny zoro amin'ny mpampitohy APC dia miteraka tara-pahazavana hita taratra amin'ny zoro mankany amin'ny fonony mifanohitra mivantana mankany amin'ny loharano. Izany dia miteraka fahasamihafan'ny fatiantoka sasany. Noho izany, ny connector UPC dia matetika takiana mba hanana farafahakeliny -50dB fiverenana very na ambony, raha APC connector fiverenana very dia tokony ho -60dB na ambony. Amin'ny ankapobeny, ny avo kokoa ny fiverenana fatiantoka no tsara kokoa ny fanatanterahana ny fampiraisana roa connectors. Ankoatra ny endriky ny fibre, ny fahasamihafana hafa miharihary dia ny loko. Amin'ny ankapobeny, manga ny connecteur UPC raha maitso ny connecteur APC.
Fandinihana ny fampiharana ny UPC sy APC Connectors
Tsy misy isalasalana fa tsara kokoa noho ny connecteurs UPC ny fahombiazan'ny optika amin'ny connecteur APC. Ao amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, ny APC connectors dia be mpampiasa amin'ny fampiharana toy ny FTTx, passive Optical tambajotra (PON) ary wavelength-fizarana multiplexing (WDM) izay mora kokoa ny hiverina very. Saingy ankoatra ny fampisehoana optika, ny vidiny sy ny fahatsorana dia tokony hodinihina ihany koa. Noho izany dia sarotra ny milaza fa ny connector iray dia mamely ny iray hafa. Raha ny marina, raha misafidy UPC na APC ianao dia miankina amin'ny filanao manokana. Miaraka amin'ireo fampiharana izay mitaky famantarana fibre optika avo lenta, ny APC no tokony ho fiheverana voalohany, fa ny rafitra nomerika tsy dia saro-pady kosa dia hiasa tsara amin'ny fampiasana UPC.
RAISEFIBER dia manolotra karazana tariby fibre optique avo lenta miaraka amin'ny connecteur LC, SC, ST, FC sns (UPC sy APC poloney).